Somaliland: Arrimo Siyaasadad Oo Ka Dhex Curtay Xisbiga Kulmiye Iyo Ja
Home Somali News Somaliland: Arrimo Siyaasadad Oo Ka Dhex Curtay Xisbiga Kulmiye Iyo Jawiga Maxamuud...
Somaliland: Arrimo Siyaasadad Oo Ka Dhex Curtay Xisbiga Kulmiye Iyo Jawiga Maxamuud Xaashi Iyo Muuse Biixi
Tan iyo maalintii Khamiistii markii Komishanka Doorashooyinka Qaranku si rasmi ah ugu dhawaaqeen in Gobollada Togdheer iyo Maroodijeex ay si rasmi ah Sabtidda uga bilaabmayso qaadashada Kaadhka Cod-bixintu. waxaa kaambeyn culus oo gaar ahi ka aloosmay Gobolka Togdheer oo xudun u ah doorashada Somaliland . oo ay ku sugan yihiin iminka wufuud ay kala hogaaminayaan Musharraxiinta Madaxweyne ee Xisbiyadda Kulmiye Iyo Waddani.
Dhinaca kale Gobolka Togdheer ayey ku nool yihiin dadka ugu badan tiradda dadka codkooda dhiiban doona wakhtiga doorashada marka laga reebo Gobolka Maroodijeex. isla-markaana Musharaxa Xisbiga Muxaafidka ah ee Kulmiye oo isku hallaynaya taageerada uu ka filayo Beelaha Bariga Burco oo taariikh ahaan xisbigaasi Kulmiye muddo dheer taageerayay ayaanu isku hawlin in uu cadeeyo Mustaqbalka kursiga Gudoomiyaha Kulmiye.Ilaa hadda ma cadda goorta uu Musharax Muuse wareejinayo xilka guddoomiyenimo ee Xisbiga KULMIYE.
Dadka falanqeeya Siyaasadda wadanka Somaliland gaara ahaana xisbul xaakimka Kulmiye isla markaana sida dhaw ula socda. waxaa ay xaqiijinayaan in isbedelo siyaasadeed oo degdega laga dhowraayo ama la filaayo in todobaadyadda inagu soo aadan ay ka curtaan Xisbiga Kulmiye gaar ahaan Kursiga mustaqbalka Gudoomiyaha Kulmiye iyo Cidda xaqa u leh.
Anoo aan u araran hadaan ka jawaabo su aalo iyo xaaladdo badan,sida waxkasta oo yimaada cidda joogta wax ku xalliso, bal aan taariikhda dib ugu noqono . si aan u helno taariikhda dhabta ah iyo marxaladaha kala duwan ee Xisbiga Kulmiye soo maray.
Waxaa xusid mudan.: Muj Maxamed kaahin markii asxaabta siyaasada la furay waxa uu ka mid ahaa oo uu ahaa aasaasayaashii ururkii uu gudoomiyaha u ahaa gudoomiyaha Guurtidda saleebaan Maxamuud aadan ee la odhan jiray ASAD. halka muj muuse Biixi ahaa ururkii Sahan mudo yar kadib waxaa dalka ingiriiska ka yimid Madaxweyne Siilanyo iyo Wasiirka Madaxtooyadda oo hawshaa bundhig u ahaa . Waxayna fureen xisbiga kulmiye.muuse biixi isna waxa uu ahaa siyaasiyiintii sida fiican markii danbe u soo dhaweeysey Madaxweyne Siilanyo iyo Wasiirka Madaxtooyadda markay xisbiga kulmiye ku dhawaaqeen .
Dhinaca kale, waxaa xusid mudan : Sanadkii 2007 ayaa waxaa loollan adagi ka dhacay Jagadda Gud-Xigeenka Xisbiga Kulmiye oo rag badan waqtigaa isu sharaxay . Waxaa ugu cuslaa Muj Dhega-weyne oo saxiib iyo rafiiq dheer ku ahayeen halgankii iyo Siyaasadaba, tartan adag iyo hiil cad ayuu ka galay Wasiirka Madaxtooyaddu ka-dib aakhirkii waxaa gudoomiye-xigeenka koowaad loo doortay Muuse Biixi Cabdi.
Mar kale ayuu hadana sanadkii 2008 Muuse biixi soo jeediyey in haddii Madaxweyne Siilaanyo loo doorto Musharaxa Madaxweyanaha isagu dhaxlo hogaaminta Xisbiga Kulmiye haddii Siilaanyo Guuleysto iyo haddii guul-dareystoba labadaba. aad ayaa loogu kala jabay.arintaasi. Xisbiga Kulmiye waxuu qarka u saarmay ama arintaasi keeni gaadhay dil-dilaac .
Waxaa xusid mudan in Musharaxa Xisbiga Kulmiye Muuse Biixi oo ahaa Gud.ku-xigeenkii 1aad ee Kulmiye iyo Keyse Xasan Cige (AHN) oo ahaa Xoghayihii Xisbiga Kulmiye ay Hargeysa ku hadheen markii shirku ka furmaayey Magaaladda Burco.
lakiin Wasiirka Madaxtooyadda Maxamud Xaashi oo arintaasi ka odeyeeyey door siyaasadeed ka qaatay ayaa waxay Madaxweyne Siilaanyo iyo ergaddii isla- qateen in shirka ay hakiyaan ilaa la xalinaayo. qodobadda Muuse Biixi daneynaayey. ugu danbeyna waxaa shirka la furay markii la garwaaqsaday dalabyaddii Muuse Biixi si sharci ahna loo ansixiyey iyo in uu hanto hogaaminta Xisbiga doorashada Madaxweynaha ka-dibna.
taasi waxay dhalisay inuu bil ka dib 2010 uu la wareego xilka Gudoomiyaha Kulmiye.sidii balanqaadku ahaa iyo fulinta heshiiskaasi ka-dibna Madaxweyne Siilaanyo wuxuu ku wareejiyey Gudoomiyinamaddii Xisbiga Muuse Biixi.
Taariikhda Kulmiye Iyada ayaana qeexda in jawaab-celinta siyaasadeed ay tahay mid sax ah oo wasiirka madaxtooyadda uu yahay siyaasiyiinta Xaqiijiyey guulihii kala dembeeyey Xisbiga Kulmiye.Musharaxa Xisbiga Kulmiye waxaa horyaalla marka laga yimaaddo Musharraxa Madaxwaynaha Xisbiga Kulmiye , arrimo saamayn wayn ku yeelan karaya kursiga qasriga yaalla.
Sida lala wada socdo xaaladda Xisbiga Kulmiye. waa arrimo soo jireen ahaa oo soo taxnaa intii xisbigu jirey isla-markaana haatan galaysa waji cusub kaas oo Musharaxnimadda Muuse Biixi ahaan saamayn ku leh gaar ahaana codka dadweynaha Bariga Somaliland
Inkastoo uu Wasiir Xaashi hadda ku maqan Imaraadka carabta . oo ay socdaal ku marayaan isaga iyo madaxweyanaha Somaliland, hadana xisbiga kulmiye ee talada dalka haya ayaa u muuqda mid ay markale ku soo wajahan-yihiin dufaano siyasdeed oo carqalad ku noqon kara xisbagaasi iyo kursiga muuse biixi haddii aan xal degdeg la gaadhin arimaha muhiimka ah.
Haddiiba xiisad xilgan ka soo cusboonaato . waa mid dhul-gariir ku ah siyaasada cusub ee xisbiga kulmiye ku galayo ololaha waana dhirbaaxo haddii aan la daaweyn dhabar jab ku ah xisbiga Kulmiye.
Dadka siyaasada Somaliland la socda ayaa sidoo kale waxay aaminsan yihiin in siyaasiyiinta Xisbiga Kulmiye sida weyn u gaadhsiiyay Gobalada Bariga oo la aaminsanyahay inuu Wasiirka Madaxtooyadda ka yahay jookar siyaasadeed, isagoo oo qayb weyn ku lahaa guushii Kulmiye ee doorashadii 2010, waana sababta uu hadda isugu arko inuu Kulmiye u horseedayo guul siyaasadeed oo horleh.
Isku soo wada duuboo Khuburada daraasaysa hoggaaminta iyo arrimaha guusha la xidhiidha waxa ay tibaaxaan in qof kasta oo marar badan guulaystay ay jirto sabab macquul ah iyo tayooyin keenay in uu guulahaas ku gaadho. Guushuna sideedaba maaha hadiyad taalla meel dhaw oo la laaci karo laakiin waa arrin u baahan shaqo adag, adkaysi iyo tayo hoggaamineed oo sarraysa.
Somaliland: Daawo Xukuumadda Somaliland Oo Ka Hadashay Farriin Digniin Ahayd Oo Ka Soo Baxday Dawladda Ingiriiska Iyo Cidda Laga Jaray Saamiga Itoobiya Ku Yeelanayso Dekedda Berbera
Somaliland: Murashaxa Madaxweyne Ee UCID Eng Faysal Cali Waraabe Oo Khudbad Taarikhi Ah Ka Jeediyay Xafladii Qalin-Jabinta Jaamacadda New Generation .